ပိုလန်နိုင်ငံသား Documentary ဓာတ်ပုံပညာရှင် Adam Kozioł နှင့် အင်တာဗျူး - ONE DAILY MEDIA
Adam Kozioł သည် ပိုလန်မှ 26 နှစ်အရွယ် Documentary Photographer တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ 2013 ခုနှစ်တွင် သူသည် ကမ္ဘာပေါ်မှ မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး လူမျိုးစုများ၏ ယဉ်ကျေးမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ရည်ရွယ်သည့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေး ပရောဂျက်တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ သူသည် လူသား၏အသွင်အပြင်များ၊ တက်တူးများ၊ အမာရွတ်များ၊ အဆင်တန်ဆာများနှင့် မျိုးနွယ်တစ်ခုကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် အသွင်အပြင်တို့ကို အထူးအာရုံစိုက်ပါတယ်။
ဤပရောဂျက်နှင့်ပတ်သက်သည့် သူ၏စကားတွင် “အမွေအနှစ်” ပရောဂျက်၏ ရည်မှန်းချက်မှာ လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင် ယဉ်ကျေးမှု ပျောက်ကွယ်သွားမည့် လူမျိုးစုများ၏ နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရောဂျက်သည် လူမျိုးတစ်မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးသည့် အမျိုးအစားများ၊ တက်တူးများ၊ အမာရွတ်များ၊ အလှဆင်မှုများနှင့် အသွင်အပြင်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအပေါ် အထူးအလေးပေးထားပါတယ်။ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် တောင်အမေရိကတို့မှ အထူးခြားဆုံးသော မျိုးနွယ်စုများကို အစအဆုံး ရုပ်ရှင်နှင့် ဓာတ်ပုံထုတ်ဝေမှုတွင် တင်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ထားပါတယ် ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်တာဗျူးကို လက်ခံသည့်အတွက် အာဒံကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Photo creditAdam Kozioł
— ဓာတ်ပုံပညာလောကထဲ ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာခဲ့လဲ? ပြီးတော့ သင့်ကိုယ်သင်လဲ အနည်းငယ် မိတ်ဆက်ပေးပါဦး
အပူပိုင်း အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို စတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် 12 နှစ်သားကတည်းက အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေကို စတင် မွေးမြူခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနဲ့ ပထမဆုံး ထိတွေ့မှုပါ။ အချိန်တွေ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရတယ်။ အသက် 16 နှစ်မှာ အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေ အမြောက်အမြားရှိနေပြီး‌ နောက် ဘော်နီယိုကို အရွယ်ရောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခရီးထွက်ရတာကို ဝါသနာပါတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အင်းဆက်တွေရဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပိုလို့တောင် အဓိပ္ပါယ်ရှိစေလို့ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အထင်ကရအခိုက်အတန့်ပါပဲ။ အလွန်ရှားပါးသောမျိုးစိတ်များစွာကို ကျွန်ုပ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး အချို့ကို ဥပုံစံဖြင့် ပိုလန်သို့ယူဆောင်လာကာ ပိုလန်တွင်မရရှိနိုင်သောမျိုးစိတ်များကို စတင်မွေးမြူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေရတဲ့ ဝင်ငွေကို နောက်ခရီးစဉ်တွေမှာ သုံးစွဲနိုင်တာကြောင့် ဒါက ကျွန်တော့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ခရီးတစ်ခုပါပဲ။ တစ်နှစ်ခွဲကြာတော့ မျိုးစိတ်သစ်ရှာနိုင်ဖို့ ဆူမားတြားကို သွားခဲ့တယ်။ ၎င်းတွင် မျိုးစိတ်6မျိုးသာပါဝင်သော Haaniella မိသားစုမှ အင်းဆက်ကို တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်သည် တစ်နှစ်လျှင် ၇ ကြိမ်ခန့်ထိပင် ပုံမှန်ခရီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။
— ဒီပရောဂျက်အတွက် အိုင်ဒီယာစတင်ရရှိလာခဲ့ပုံကိုလည်း သိချင်ပါတယ်
ကျွန်‌တော် မကြာခဏ သွားသည်မှာ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားဆုံး အင်းဆက်များရှိသည့် ဘော်နီယို- မက္ကာဖြစ်ပါတယ်။။ ကျွန်းပေါ်ရှိ နေရာတိုင်း Sarawaku၊ Sabah နှင့် Kalimantan တို့တွင် ရှားပါးမျိုးစိတ်များစွာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အင်းဆက်မွေးမြူရေး ဖိုရမ်မှာ တင်လိုက်တယ်။ Sarawak ဘက်မှာတော့ Iban ခေါင်းဖြတ်သူများရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း မကြာခဏ ကြားခဲ့ရပါတယ်။ လူမျိုးစုမျက်နှာဖုံးများကို ကျွန်တော်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Bunga Terung ဟုခေါ်သော ပခုံးပေါ်တွင် လူမျိုးစုတက်တူးထိုးထားသော သက်ကြီးရွယ်အိုများရှိနေသေးကြောင်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ ထူးခြားသော သတ္တိရှိသူများဖြစ်ပြီး အခြားမျိုးနွယ်စုများနှင့် တိုက်ပွဲများတွင် ရန်သူ၏ဦးခေါင်းကို ၎င်းတို့၏ မျိုးနွယ်ထံ ယူဆောင်လာနိုင်သူများတွင် ယင်းတက်တူးများရှိကြောင်း သိရခြင်းက ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်မှာ သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေနဲ့တွေ့ရတာကို သဘောကျတယ်။ခရီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး 2013 မှာ မလေးရှားသူငယ်ချင်းနဲ့ မျိုးနွယ်စုရဲ့ တက်တူးအဖွဲ့ဝင်တွေကို ရှာဖွေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Iban မျိုးနွယ်စုများနေထိုင်သော Sarawaku ရှိ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိတွင် ၎င်းတို့သည် တောတွင်းအလယ်တွင် အေးချမ်းသာယာသော ရွာများဖြစ်ကြပြီး၊ အမှန်မှာ တောထဲတွင် ရှည်လျားသော အဆောက်အဦများဖြင့် မိသားစု 15 ယောက်ထက်မနည်း နေထိုင်ကြပါတယ်။
၃ ပတ်ကြာအောင် မော်တော်စကူတာဖြင့် ခရီးသွားခြင်း ၊ လွယ်အိတ်တစ်လုံးဖြင့် ခြေလျင်ခရီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုခက်ခဲသောနေရာများကို ခရီးရှည် ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ခြေတံရှည်အိမ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော့်အတွက် ဒါက ညဘက်မှာ အင်းဆက်တွေကို ရှာဖွေတာထက် ပို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားမှုတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ရှည်များထဲမှ တစ်ခုတွင်၊ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ တက်တူးထိုးထားသည့် သက်ကြီးရွယ်အို ၃ ဦးကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ၊ သူတို့နဲ့ စကားပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီဇာတ်လမ်းတွေအားလုံးကို နားထောင်ရတဲ့ နောက်ဆုံးလူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ သူတို့သည် အသက် 90 အနည်းစု နှင့်အများစု 70 နှစ်များဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က သူ့တီရှပ်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်ချိန် တစ်ကိုယ်လုံး ပြည့်နေတဲ့တက်တူးတွေကို လည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလူတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့ အင်တာဗျူးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ အပြန်ခရီးမှာ အဲဒီဒေသက လူတွေကိုထပ်ရှာဖို့ ဒုတိယခရီးစဉ်အတွက် အစီအစဉ်ကို တွေးနေမိပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အခြေအနေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရင်း မျိုးနွယ်စုအများစုရဲ့ အခြေအနေဟာ ဆင်တူကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။အများအားဖြင့် နောက်ဆုံး မျိုးဆက်များကျန်ရှိနေတတ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏မျိုးနွယ်စုလက္ခဏာကို ၎င်းတို့၏တက်တူးများနှင့် အမာရွတ်များဖြင့် သက်သေပြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ ဘဝ၊ ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ပုံပြင်ကို ပြောပြနိုင်သူများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သေဆုံးပြီးနောက် သမိုင်းဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ဦးတည်ရာတွေက အင်းဆက်တွေ မဟုတ် တော့ပါဘူး။ လူတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
— သင့်ဓာတ်ပုံများတွင် တွေ့မြင်ရမည့်အရာများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားလုံးများဖြင့် ဖော်ပြပေးပါလား ??
ယဉ်ကျေးမှု အလှတွေ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းက လူတွေရဲ့ ဇစ်မြစ် အမျိုးမျိုးကို ပြချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တက်တူးထိုးခြင်း၊ အမွေးအမှင်များ နှင့် လူမျိုးတစ်မျိုးကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် တစ်ဦးချင်း အင်္ဂါရပ်များ အကြောင်းများပါဝငိပါတယ်။ အဝတ်အစား၊ လက်ဝတ်ရတနာများကဲ့သို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းအ၏ အသွင်အပြင်များနှင့် ပြင်ပဂုဏ်သတ္တိများကို ကျွန်တော်လည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဓာတ်ပုံမရိုက်ခင် လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်အောင် ကြိုးစားပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်တွေ ဖြုန်းပါတယ်။ အချိန်ယူကာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရင်းနှီးအောင် လုပ်ခြင်းက ဘာလုပ်ရမှန်း သိလာစေပြီး ပိုအရေးကြီးတာက အဲဒီလူတွေကို စိတ်သက်သာရာ ရစေတယ်။
— ဒီလိုအံ့ဩဖွယ် ရိုက်ချက်တွေကို ဘယ်လိုရိုက်ကူးခဲလဲ ?? သင့်နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးနိုင်မလား ??
အလင်းရောင်ချိန်ညှိမှုကို ကျွမ်းကျင်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် ကူညီပေးတာက စတူဒီယိုအလင်းရောင်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခရီးဆောင်အိတ်ဟာ ၆၅ ကီလိုဂရမ်အထိ အလေးချိန်ရှိသောကြောင့် အမှန်တကယ် ကြီးမားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ကာ ထို့နောက်တွင် တော့ ကျွန်တော် အလင်းရောင်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်လာပါပြီ။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒီက ဒေသခံတွေနဲ့ ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ကြိုးစားခဲ့သလို အချိန်အတော်ကြာမှာတော့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှာ ကူညီပေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ ခရီးထွက်ခဲ့ပြီး အများကြီး ပိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
— ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ ပြဿနာများ ရှိပါသလား??
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ပါပဲ။ လိုရာခရီးကို ရောက်ရန် အချိန်နှင့် ငွေကြေးအမြောက်အများ လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော့်ကို လှည့်စားတဲ့ လမ်းပြနဲ့ ပို့ဆောင်သူတွေထံမှ ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်၊ နောက်တစ်ကြိမ် အရက်သေစာမူးယစ်ပြီး သေနတ်တွေနဲ့ပစ်တဲ့အထိ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ အီသီယိုးပီးယား ရွာတစ်ခု ကနေ ညသန်းခေါင် အလုပ်ပိုက်ပြီးပြေးရဖူးပါတယ်။ . အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း ၃ ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ တစ်ကြိမ်မှာ အလွန်ဆိုးတာ ကြောင့် မည်သူ့ကိုမျှ မဆက်သွယ်နိုင်သည်အထိဖြစ်ဖူးပါတယ်။ နောက်ထပ် ကြီးလေးတဲ့ဒုက္ခတွေ ထပ်မကြုံရပါစေနဲ့လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
— ဒီလိုဓာတ်ပုံတွေကို ဘာကြောင့်ကြိုက်နှစ်သက်တာလဲ ?
ယဉ်ကျေးမှုအရ လူတွေနဲ့ လက်တွဲပြီး သူတို့ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို သိရတယ်။ မျိုးနွယ်စု တွေဆီကို ရောက်ဖို့ စွန့်စားရပြီး ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ စီစဉ်ရတာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ပိုလန်မှာ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း လေ့လာဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်၊ ရိုက်ချက်တွေကို ပုံကြမ်းဆွဲနေပ့တယ်။ အများအားဖြင့်တော့ စီစဉ်ထားတာထက် ပိုလုပ်လို့ရပေမယ့် ခရီးစဉ်တိုင်းကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်မရသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်မလုပ်ဖူးတဲ့အရာတွေ ဒါမှမဟုတ် သေချာပေါက် တွေးထားပြီးမှ တခြားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အတူ မလုပ်မိခဲ့တာတွေ နောင်တရပါတယ်။ Application တစ်ခုတွင် ကျွန်ုပ်၏အတွေးအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး နောက်ခရီးစဉ်များအတွက် ၎င်းတို့ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ခရီးစဉ်တိုင်းက ကျွန်တော့်ကို အရမ်းတိုးတက်လာစေပြီး ကျွန်တော့်အတွက် အရမ်းဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါတယ်။
–သင်ပေးလိုတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုခု ရှိပါသလား?
လူတို့၏ စစ်မှန်သော ဇာတ်လမ်းကို တင်ဆက်ပြီး တစ်ဦးချင်းကို စဉ်းစား‌စေချင်ပါတယ် ။ ပရောဂျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာ မက်ဆေ့ချ် မရှိပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုယ်စီရှိကြပြီး ဒါက ပရောဂျက်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ အလှအပကိုလည်း အာရုံစိုက်သလို သူတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအလှရဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေကို ရွေးချယ်ပြီး တင်ပြချင်ပါတယ်။2စက္ကန့် လောက်ကြည့်ပြီး ကျော်သွားရမှာမျိုးမဟုတ်တဲ့ ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးလိုပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လူများကြား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေရတဲ့ ပုံတွေကို ဖန်တီးချင်ပါတယ်။